काठमाडौं – हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति बढ्दै जाँदा भारतीय जलसेनाले भारतीय जलसीमा जनिक चीनको युद्धपोत र पनडुब्बी पत्ता लगाएको छ ।
भारतीय जलसेनाको सर्वेक्षण विमानले गश्तीका बेलामा चिनियाँ युद्धपोतको तस्वीर खिचेको छ । भारतीय जलसीमा नजिक भएर जाने सबै व्यावसायिक जहाज तथा युद्धपोतको निगरानी भारतीय जलसेनाले गर्छ ।
चिनियाँ एम्फिबियस लडाकू पोत शियान र मिसाइल फ्रिगेटको तस्वीर सार्वजनिक भएको हो । तस्वीर पी–८१ मेरिटाइम सर्भेलान्स एयरक्राफ्टले लिएको हो । एयरक्राफ्टले हिन्द महासागरको गश्ती गर्ने क्रममा निकै माथिबाट तस्वीर लिएको हो ।
गश्ती विमानले चिनियाँ पोतबाहेक आणविक पनडुब्बी पनि ट्य्राक गरेको छ । मलाक्का जलडमरुको बाटो भएर हिन्द महासागरमा चिनियाँ पोत पसेलगत्तै भारतीय जलसेनाले निगरानी बढाएको छ र रक्षा विभागलाई सूचित गर्‍यो ।
हङकङ विरोध प्रदर्शनमा हातेबम भेटियो
सिरियाबाट करिब एक हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्न ट्रम्पको निर्देशन
पाकिस्तानमा ५.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सडक चिरिए
घरिघरि बिरामी पर्नुहुन्छ ? यो कुरा खान थाल्नुस् ! आजभोलिको जीवनशैलीका कारण व्यक्तिहरू बारम्बार बिरामी परिरहेका छन् । आधुनिक मानिसहरूको खानपिनको बानी परिवर्तन भएको छ । जंक फूड खाने बानीले गर्दा आधुनिक मानिसहरूको पाचनप्रणाली नै बि...
महरा र रोशनीको फरेन्सिक जाँच